June 10, 2021 - Online Hartha
June 10, 2021 by Online Hartha
ATMစကျထဲက ကဒျပွနျထှကျမလာတော့ဘူးဆိုရငျ ဖွရှေငျးရမယျ့ အကောငျးဆုံး၊ခေါငျးသုံးနညျးလမျး
ပြတ်တုန်း လပ်တုန်း ၂၃ ဆိုတဲ့အတိုင်း… ကိုစိုးဝင်းတစ်ယောက် ATM စက်ထဲက ရှိစုမဲ့စုလေး ထုတ်ပါတယ်…ပိုက်ဆံထွက်မလာတဲ့အပြင် ကဒ်ပါဝါးသွားတယ်….။အဲဒါနဲ့ ဘဏ်ကိုဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာပေါ့… ဘဏ်က ရုံးပိတ်ရက်မို့လို့ တနင်္လာနေ့ကြရင်အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်…။ကိုစိုးဝင်း ဘဝင်မကျနိုင်…. ပိုက်ဆံသုံးစရာမရှိလို့ လာထုတ်ခါမှ ကဒ်ပါထွက်မလာတော့ဘူးဆိုတော့….ရုံးပိတ်ရက်အတွင်း ကျုပ်က ရေသောက်နေရမှာလား…အကြံတစ်ခုရသွားပြန်တယ်…. ဘဏ် hotline ကိုဖုန်းဆက်ပြီး…” အမ….အမတို့….***လမ်းက ATM စက်ကြီးကလေ… ကျနော် တစ်သောင်းတည်း ထုတ်တာကို တစ်သောင်းတန်တွေ ၁၀ ရွက်လောက်ထွက်လာတယ်ဗျ… ” မကြာပါဘူး….. ဘဏ်က service team ကြီး ကားတစ်စီးနဲ့ရောက်လာပါလေရော…..၊ ကိုစိုးဝင်းကဒ်လည်းထုတ်လို့ရသွားသလို ငွေလည်းထုတ်လို့ရသွားတယ်…. လွယ်တော့မလွယ်ဘူး ရိုးသားရတာပေါ့… ကွန်ပလိန်းတက်ချင်းအနုပညာ….။ 😅😆😂(ပုံပြင်သာဖြစ်သည်)တကယ်လုပ်သင့်ရင်လဲ လုပ်ကြပေါ့။ Credit : O’chu (Thet Cho) Unicode Version ပွတျတုနျး … Read more
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး နာရီစင် မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေတာပဲကိုး လှတောသားတစ်ယောက် ဈေးဝယ်ဖို့ဝက်လက်မြို့ရောက်တော့ ဈေးထိပ်နာရီစင်ကြည့်မိသတဲ့။ သူကြည့်တဲ့အချိန်မှာ နာရီစင်ရဲ့အနောက်ဖက်နာရီက ၉:၀၀ နာရီထိုးနေသတဲ့။ ဒါနဲ့ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ပတ်ပြီး မြောက်ဖက်ကနာရီကြည့်တော့ ၁၂:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။ နာရီစင်ကိုလက်ယာရစ်ဆက်ပတ်ပြီး အရှေ့ဖက်ကနာရီကို ကြည့်လိုက်တော့ ၃:၀၀ နာရီပြနေသတဲ့။ နာရီစင်ကိုဆက်ပတ်ပြီး တောင်ဖက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ ၆:၀၀ နာရီထိုးနေပြီတဲ့။ ဒါနဲ့ ဈေးထဲဝင်ဈေးမဝယ်တော့ပဲ လှတောပြန်သွားသတဲ့။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့မိသားစုကိုပြန်ပြောလိုက်တာက- “ဝက်လက်ဈေးထိပ်က နာရီစင်ကြီး ကြီးချက်ကတော့ကွာ မနက် ၀၉:၀၀ နာရီကပတ်ကြည့်လိုက်တာ ညနေ ၀၆:၀၀ နာရီထိုးမှ တစ်ပတ်ပြည့်သတဲ့” ဖတ်ရှုသူ များအားလုံး ဘေးဘယာဝေးကွာပြီး စိတ်နှလုံးရွှင်လန်းကြပါစေ…။ Credit: Kyaw Wai Unicode Vesion ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး နာရီစငျ မွနျမာပွညျမှာ ရှိနတောပဲကိုး လှတောသားတဈယောကျ ဈေးဝယျဖို့ဝကျလကျမွို့ရောကျတော့ … Read more
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ တငျ၊ရငျတှကွေညျ့ပွီး အပြိုစဈလား မစဈလား ဝဖေနျနတေဲ့ကောငျတှဖေတျပါ
ယောင်္ကျား​လေးတိုင်းဖတ်​ပါ၊၊ယောက်ျားဆိုတာမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ … မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တင် ရင် တွေကြည့်ပြီးအပျိုစစ်လား မစစ်လား ဝေဖန်နေတဲ့ တစ်ချို့ကောင်တွေမင်းတို့ရော လူပျိုစစ်ရဲ့လား? ရမလား စမ်းတာ ယောက်ျားသဘာဝလို့ မပြောပါနဲ့အဲ့ဒီစကားတစ်ခွန်းကြောင့် မိန်းကလေးပေါင်းများစွာရဲ့အရှက်သိက္ခာ နစ်နာမှုတွေ ဘယ်လောက်များပြီးလဲကိုယ်ချင်းစာမိရဲ့လား အိုင်တွေ့လို့ ခြေဆေးမယ် ဆိုကတည်းကကိုယ်ခြေထောက်က နဂိုကတည်းက မသန့်လို့ပဲ ဆိုတာသိထားပါ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က နှမချင်းစာနာတတ်တဲ့စိတ် မရှိရင်ခွေးထက်ယုတ်ညံသွားလိမ့်မယ် Tattoo ထိုးမှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလားဆေးလိပ်/အရက်သောက်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလားဗလတောင့်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလား နောက်ဆုံးစစ်တပ်ထဲဝင်မှ ယောက်ျားပီသတယ် ထင်နေလားတစ်ကယ်တမ်းတော့ ယောက်ျားပီသဖို့ သူများသားသမီးကိုမယုတ်မာဖို့ပဲ လိုတာပါ မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ အတွက်မင်းခေါ်သွားဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တည်းခိုးခန်းအစား မင်္ဂလာခန်းမထဲ ပြောင်းခေါ်ခဲ့လိုက်ပါ မင်းသာ ယောက်ျားကောင်းဆိုရင်အချစ်တစ်ခုကို ဘန်းပြပြီး သူအဝတ်အစားတွေ ချွတ်နေတဲ့မင်းလက်ကို … Read more
Beech 1900 D သယျယူပို့ဆောငျရေးလယောဉျ (US Made) ပကျြကမြှုရှငျးတမျး
Beech 1900 D သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ် (US Made) ပျက်ကျမှုရှင်းတမ်း ….. မပြောချင်ပေမယ့်လည်း ပြောမှရတော့မယ် ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ငပိန်းတွေက မဟုတ်တမ်းရားတွေ တင်ကြတော့မယ်ဆိုတာသိနေတယ်… စလာကတည်းက လေယာဉ်ကို အပြစ်တင်မယ်… ဆရာတော်ကြီးက တပ်က ဖိတ်လို့ သွားတယ်ဆိုပြီးဖွမယ်… သိတယ် ဒါတွေ ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာသိတယ်… ဈေးကုန်း ဆရာတော်ကြီးကို ပြည်သူတွေက ဖိတ်ထားတဲ့အလှူပွဲအတွက်သွားတာ… စာသင်တိုက်ကြီး ပန္နက်တင်ပွဲ ……အလှူရှင်တွေကလည်း တစ်ခါတည်းဆရာတော်ကြီးနဲ့ လိုက်တယ် ဖြစ်စဉ်က ဆရာတော်ကြီးတို့ထက်အလှူရှင်မိသားစုကလည်း ဆန္ဒစောနေတာပဲ… အလှူရှင်မိသားစုက မင်္ဂလာချိန်ကို ၉ နာရီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်… ၉ နာရီမှာ လုပ်ဖို့အတွက် ဆန္ဒစောတယ်… ဒါ့ကြောင့် အချိန်မီသွားချင်ကြတယ်… ဒီထဲမှာ ပြောစရာရှိတာကအလှူရှင်နဲ့ရော ဆရာတော်ကြီးနဲ့ပါတပ်နဲ့ မပတ်သက်ဘူး… အချိန်မီရောက်ဖို့အတွက် တပ်ကို အကူအညီတောင်းတယ်… ပြောရရင် မန္တလေးတိုင်းက … Read more
အမြိုးသမီးအင်ျဂါကို မပွုလုပျသငျ့သညျ့အရာမြား ကနျြးမာရေးအတှကျအရေးကွီးပါသညျ
(၁) ပြွတ်နဲ့ထိုးသွင်းပြီး ရေမဆေးရ..၊ တစ်ချို့က Douching Advice (ရေပြွတ်ကဲ့သို့သော)အရာများသုံးပြီး ယောနိအတွင်းပိုင်းကို ထိုးသွင်းကာ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ကြပါတယ်။ ပိုးသတ်သန့်စင်ထားကြောင်း ကြေငြာထားရင်လည်း အသုံးပြုဖို့ မသင့်ပါဘူး..။ သားအိမ်အတွင်းပိုင်းဟာအရမ်းနူးညံပြီး pH ပမာဏလွန်ကဲတဲ့ ရေနဲ့ တွေ့ရင် ပျက်ဆီးတတ်သလို အခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေလည်း ရှိပါတယ်..။ (၂) လက်ဖြစ်ဆေးဝါးများ မသုံးရ..၊ တစ်ချို့တွေက ရာသီလာတဲ့အခါမျိုးမှာ အင်္ဂါရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေဖို့ ပေါင်းမြက်နဲ့ အုံခြင်း၊ လက်ဖက်ခြောက်အဖန်ရည်နဲ့  ဆေးခြင်း၊ ရေခဲသွင်းခြင်းများ လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို လုံးဝ ရှောင်ရှားရမယ်ဆိုတာာ အမျိုးသမီးတိုင်း သိစေချင်ပါတယ်..။ (၃) အရာဝတ္ထုများနဲ့ ကျဉ်းမြောင်းအောင် မပြုလုပ်ရ..၊ လင်ယောက်ျားရဲ့ အလိုကိုလိုက်ပြီး အရာဝတ္ထု၊ ဖော့၊ စက္ကူအစရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး လမ်းကြောင်းကျဉ်းမြောင်းအောင်လုပ်ခြင်း၊ ကျောက်ချဉ်ကဲ့သို့သော အရာများ လိမ်းခြင်းဟာ … Read more
“မင်္ဂလာပါ” ဆိုတဲ့ နှုတ်ခွန်းစကားကြောင့် သေမင်းလက်ကနေ သီသီကလေး လွတ်မြှောက်ခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
အမေရိကန်နိုင်ငံက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လေးပါ… သားသတ်စက်ရုံတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူ့အလုပ်ချိန်ပြီးခါနီး အိမ်မပြန်ခင်လေးမှာ ခုတ်ထစ်ပြီး အမဲသားတွေကို မပုတ်သိုးအောင် တန်းစီချိတ်ဆွဲထားတဲ့ အအေးခန်းထဲကို ဝင်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝင်ပေါက်သံတံခါးကြီးဟာ ရုတ်တရက်ပိတ်သွားတယ်။တံခါးကြီးဟာ အထဲကနေ ဖွင့်လို့ မရဘဲ အပြင်ကနေပဲ ဖွင့်လို့ရတယ်။ အအေးခန်းထဲက အပူချိန်ကလည်း ရေခဲမှတ်အောက် ရောက်တဲ့အထိ အေးနေတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံးလည်းအလင်းရောင်မရှိ မှောင်ပိန်းသွားတယ်။သူလည်း ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ အသံကုန် အော်တယ်။တံခါးကို လက်နဲ့ တဝန်းဝုန်း ထုပုတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဝင်ပေါက်တံခါးဟာ သံထုထည်ကြီးကြီးမားမားနဲ့ အထူကြီး လုပ်ထားတာမို့ အပြင်က လူတွေ မကြားနိုင်ပါဘူး။နောက်ပြီး အလုပ်ဆင်းချိန်မို့ အလုပ်သမားအားလုံးနီးပါးလည်း အိမ်ပြန်သွားကြပြီ။ သူလည်း တံခါးကို ထုလိုက်၊ အော်ခေါ်လိုက်နဲ့ တစ်နှစ်ရီကြာတော့ လက်တွေနာ၊ အသံကုန် မောပန်းလာလို့ အအေးခန်းအတွင်းနံရံကို မှီရင်း နားနေလိုက်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ … Read more
facebook ကိုယျတိုငျက သတိပေးထားတဲ့ Messenger ထဲကို Rolex 100th Anniversary Celebration မကျဆော့ကိုဖှငျ့မကွညျ့သငျ့တဲ့ အကွောငျးအရငျး
facebook ကိုယ်တိုင်က သတိပေးထားတဲ့ Messenger ထဲကို Rolex 100th Anniversary Celebration မက်ဆော့ကိုဖွင့်မကြည့်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း Messenger ထဲကို Rolex 100th Anniversary Celebration လို့ friend list ကနေ မက်ဆေ့ပို့လာရင်ဖွင့်မကြည့်ပါနဲ့ အဲ့ဒါကို Scam message လို့ခေါ်ပါတယ်… ဒီလင့်မှာ အသေးစိတ်ဖတ်လို့ရပါတယ် – https://www.rappler.com/newsbreak/fact-check/rolex-gives-away-watches-celebrate-anniversary-2021 facebook ကလည်း ဒီမက်ဆေ့ပါဝင်တဲ့ content တွေကို malicious content အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါတယ် whatsapp မှာလည်းအလားတူပြန့်နှံ့နေပါတယ် အထူးသဖြင့် ဒီလင့်ကိုနှိပ်မိပြီး မိမိ အကောင့်တွေ ပါ့စဝပ်တွေဖြည့်ခိုင်းရင်လုံးဝမဖြည့်မိဖို့လိုပါတယ် ဖြည့်မိရင်လည်းချက်ချင်း ပါ့စဝပ်တွေပြန်ပြောင်းပါ မက်ဆင်ဂျာမှာ ကိုယ်က ဘာမှမလုပ်မိပဲ သူ့အလိုလို မက်ဆေ့တွေလိုက်ပို့နေတယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဝင်မိတဲ့ app … Read more
မနကျက လယောဉျပကျြကမြှုကွောငျ့ သူ့ရငျထဲမှာ ဖွဈပျေါလာသော ခံစားခကျြအား သီခငျြးဆိုကာ ပွောပွလိုကျတဲ့ တိုငျးကြျော(ရုပျသံ)
ဒီနေ့မနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်ခန့်တွင် နေပြည်တော်လေဆိပ်မှ အနီးစခန်းလေဆိပ်သို့ ဆင်းသက်စဉ် ဆိုးရွားလှတဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေကြောင့် ပျက်ကျသွားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလေယာဉ်ပေါ်တွင် လူ (၁၄) ယောက်ဦးတွင် အလှူရှင်မိသားစုနှင့်အတူ ဆရာတော်ကြီးများလဲ ပါဝင်စီးနင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပြီး (၁၂) ဦး ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်သွားခဲ့ကာ နှစ်ဦးကတော့ ဦးခေါင်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာရထားတဲ့လူနာ(၂)ဦးကိုတော့ တပ်မတော်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ပြီး ဆေးကုသမှုခံယူနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျက်ကျတဲ့ လေယာဉ်အမျိုးအစားကတော့ အမေရိကန်လုပ် Beechcraft 1900D သယ်ပို့လေယာဉ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ လူမှုကွန်ယက်တွင် အတော်လေးကို ပျံ့နှံ့နေပြီး ပြည်သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေကို ဝေမျှနေကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ကြရမှာပါ။ မကြာသေးခင် မိနစ်ပိုင်းလောက်ကလည်း လူရွှင်တော် တိုင်းကျော်ရဲ့ Facebook အကောင့်တွင် ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခု တင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ … Read more
မလိုလားတဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် VASELINEကို ဒီလိုတွဲဖက်အသုံးပြုပါ
မလိုလားတဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် VASELINE ကို အသုံးပြုလိုက်ရအောင် Vaseline ကို နည်းလမ်းမျိုးစုံ နဲ့အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာပြော ရရင် မိခင်အများစုက ကလေးဒိုက်ပါ ခံတာများ လာလို့ အသားအရေနီ ရဲလာတဲ့ အချိန်မှာ သုံးနိုင်သလို အသေးအဖွဲ ထိခိုက် ရှနာ၊ မလိုလားတဲ့ အမွှေးအမျှင်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် VASELINE ကို အသုံးပြုလိုက်ရအောင် အပူလောင်တွေ မျိုးအတွက် လည်း ကိုယ့်ကိုယ် ကို ကာကွယ်ဖို့ အတွက် သုံးပေးနိုင် ပါတယ် ။Vaseline ရဲ့ အဓိကအား သာချက်ကတော့ ခြောက်သွေ့မှုအတွက် အစိုဓာတ် ကိုဖြည့်တင်းပေးတာမို့ အသား အရေခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အသား အရေကွဲ အက်ခြင်းတို့ အတွက် လူအများစု အသုံးပြုကြ တာလည်းဖြစ် … Read more